निलम्बित एसपी विष्टले यसरी खोले रोशनी–बबितासँगको सम्बन्ध ! आफ्नो छोरा बारे के भने त ?
असोज ०२, २०७५ बिगुल
काठमाडौँ- गत साउन महिनामा हत्या भएकी निर्मला पन्तको हत्यारा अहिले सम्म पत्ता लग्न सकेको छैन। अनुसन्धानमा व्यापक त्रुटी भएको भन्दै निष्कर्ष पनि निक्लिसकेको अवस्था रहेको छ।
घटनाको अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको भन्दै निलम्बनमा परेका एसपी डिल्लीराज विष्ट केहि दिन देखि संचार माध्यमहरुमा छाइरहेका छन्। निलम्बन पछि उनले आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।
उनले आफ्नो बचाऊ गर्दै आफू निर्दोष रहेको र आफू यस घटनामा कुनै पनि तरिकाबाट संलग्न नरहेको विभिन्न विभिन्न सञ्चारमाध्यममा बताउँदै आएका छन्।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उनले निर्मलाको बलात्कार पछि भएको हत्यामा आफ्नो छोराको कुनै पनि संलग्नता नभएको जिकिर गर्दै आएका छन्।
यति मात्र नभई उनले यस घटनाको अनुसन्धानको दायरामा रहेका रोशनी बम र बबिता बमसँग आफ्नो कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको प्रष्ट पार्दै रोशनी बम र बबिता बमाको बचाउ पनि गर्दै आएका छन्।
निर्मलाको डिएनए सुरक्षित रहेको कारण त्यहीबाट अनुसन्धान शुरु गर्न सकिने भन्दै उनले घटना भएको स्थान नजिकै जिकै लागुऔषध खाने व्यक्ति, काम गर्नेहरू बस्ने भएको हुँदा उनीहरुलाई पनि अनुसन्धान गर्न सकिने बताएका छन्।
उनी विरुद्ध विभिन्न संचार माध्यमहरुले गलत र भ्रामक समाचार समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै विभिन्न मिडिया विरुद्ध कानुनी प्रक्रिया शुरु गरेको पनि बताउँदै आएका विष्ट आफू नालायक प्रहरी नभई सच्चा प्रहरी भएको समेत जिकिर गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित : मङ्गलबार, असोज ०२, २०७५११:०९
जेब्राक्रसिङ मेटिएपछि सडक वारपार गर्न कठिनाइ !
सर्भे गर्न गएका ओभरसियरको चिप्लिएर मृत्यु !
एम्बुलेन्सको ठक्करबाट गम्भीर घाईते विद्यानन्दको मृत्यु !
मानिस जम्मा भएको ठाउँमा विमान जोतियो ! तीनको मृत्यु !
गुल्मीमा आफ्नै छोरीलाई अप्राकृतिक मुख मैथुन गराउने बाबु पक्राउ!
आज बिहान आफ्नै बाबुले दुई छोराको हत्यापछि गरे आत्महत्या
दुई समूहबीच खुकुरी वा चक्कु हानाहान हुँदा एकको मृत्यु